Indawo yokudlela e-Nigeria ibukeka njengengaphakathi lendiza | Scrolla Izindaba
Indawo yokudlela e-Nigeria ibukeka njengengaphakathi lendiza
Abathandi bokudla base-Nigeria sebengenza sengathi bandiza ngebhanoyi kanti lutho basephansi nje.
I-Urban Air, indawo yokudlela ese-Abuja, iguqulwe yabukeka sengathi ingaphakathi lendiza.
Kuhlotshiswe ngesibhakabhaka esiluhlaza, amafu amhlophe emafasiteleni kanye nemenyu yokudla kwendiza.
Ukudla kwenziwa “egumbini elikhethekile” ebese kulethwa kubathandi bokudla abasuke behleli bebophe amabhande ezihlalo.
E-Nigeria bamisa izindiza ezihambela umhlaba wonke noma amanye amazwe ngoNdasa, yize izindiza ezihambela izindawo zase-Nigeria sezivuliwe futhi ziyasebenza.
Abantu base-Nigeria abathanda ukugibela amabhanoyi bajabule kakhulu ngalokhu okwenziwe yi-Urban Air.
Sithemba ukuthi ukudla kwakhona kungcono futhi kumnandi kunokudla okuningi okudliwa kwizindiza.